I-CardiASK neCardiomagnyl - yisiphi isidakamizwa esingcono > Ukwelashwa nokuvimbela
Ukudla ngesifo sikashukela
Izinkinga zesifo sikashukela
Isifo Sikashukela: Ulwazi olubalulekile
Isifo Sikashukela Nemidlalo
I-CardiASK noma i-Cardiomagnyl, iyiphi engcono
I-Cardiomagnyl ingeyeqembu lama-antiplatelet agents. Ngokuqondile, umkhiqizo uyi-ejenti ye-antiplatelet ngokuhlangana. Ngokwesihlukaniso se-ATX, lesi sidakamizwa sisho inhlanganisela yama-platelet aggregation inhibitors.
I-Cardiask yisidakamizwa esingelona se-steroidal anti-inflammatory. Kodwa, ngenxa yezakhiwo ze-antiplatelet ze-acetylsalicylic acid, umuthi ubuye yi-ejenti ye-antiplatelet.
Ngokuphathelene nomthelela wazo emzimbeni womuntu, le mishanguzo iyafana. Zivimba ukushayeka kwegazi, zithuthukise ukusebenza kwenhliziyo, futhi zinciphise nengozi yokushaywa yinhliziyo nokushaya kwenhliziyo. Kepha kunomehluko phakathi kwabo.
Umphumela ojwayelekile wemithi yemithi usekelwe emandleni we-acetylsalicylic acid ukuvimbela ukwakheka kwama-prostaglandins. Lezi zinto ze-lipid, ikakhulukazi - i-prostacyclin, zikhuthaza ukuhlanganiswa kweplatelet (ukunamathela). Ngenxa yokuhlanganiswa, izingqimba zegazi zakha emithanjeni yegazi, ebeka usongo oluyingozi kubantu. Futhi i-prostaglandin E2 inomphumela we-pyrogenic (ubangela umkhuhlane). Ukucindezela ukuvela kwayo, i-ASA ikhiqiza umphumela we-antipyretic.
Izinzuzo kanye nokubi kwe-CardiASK
Umuthi usetshenziselwa lezi zifo kanye ne-pathologies yenhliziyo nemithambo yegazi:
ukunqanda ukuphindeka nokufa ngemuva kokuqothuka kwe-myocardial,
Ukuvimbela kanye nokwelashwa kwe-thromboembolism ngama-valve wezinhliziyo ezenziwa,
ukulimala kwe-artery ye-coronary, engeyona i-atherosulinotic ngokwemvelo,
isifo senhliziyo esisindayo
embolism ejwayelekile yamaphaphu.
Ukungabekezelelani komuntu ngamunye kwizakhi.
Iminyaka yezingane ifinyelela eminyakeni eyi-15.
Ukukhulelwa nesikhathi sokuncelisa.
Izifo zesisu ezihambisana nokwakheka kokuguguleka kanye nezilonda.
Ukuntuleka kwe-renal ne-hepatic.
Ukugcoba emgodini wokugaya ukudla.
Ukuntuleka kweVitamin K
I-asthma ye-bronchial ebangelwa ukuthatha ama-salicylates.
Ukushoda kwe-glucose-6-phosphate dehydrogenase (acetylsalicylic kuyinto enobungozi engadala ukusabela okungalindelekile komzimba wesiguli).
kusuka emgodini wesisu: isicanucanu, ukushisa ngamandla kwenhliziyo, ukugabha, izinhlungu esifundeni se-epigastric, ukwakheka kokuguguleka kwezilonda nezilonda emgodini wesisu,
kusuka ohlelweni lwe-hemopoietic: ekhaleni, okopha esiswini,
ohlangothini lokuphefumula: i-bronchospasm,
kusuka ohlelweni lwezinzwa oluphakathi: isiyezi, i-tinnitus, izimpukane phambi kwamehlo,
ukusabela komzimba: i-hyperemia, ukulunywa, i-urticaria, i-edema kaQuincke.
Ukulinganiselwa nemiyalo ekhethekile:
Ngezinga elincishisiwe le-uric acid excretion, ukuthatha umuthi ku-dosage encishisiwe kungavusa ukuthuthukiswa kwe-gout.
Ezigulini ezinezifo zokuphefumula, kubantu abanenkinga yokungezwani komzimba, kanye neziguli ezine-asthma ye-bronchial, ukuthatha i-Cardiask kungavusa i-bronchospasm, ukuhlaselwa yisifo somoya, noma ukusabela ngokushesha komzimba.
Lapho isetshenziswa ngokuhlangana nama-antiplatelet agents, ingozi yokopha iyanda.
Akunconyelwe ukusetshenziswa ndawonye ne-Ibuprofen.
Umthamo owengeziwe womuthi uvusa ukuthuthukiswa kwe-hypoglycemia. Lokhu kubalulekile ukucubungula ukwelashwa kweziguli ezinesifo sikashukela.
Uma usebenzisa umuthi ngokuhlangana notshwala, ubungozi bokulimala kwe-mucosa esiswini buyakhuphuka.
Izindleko ze-CardiASK zamukeleka kahle kumhlali omaphakathi. Intengo yokufaka umuthi kumthamo ka-50 mg ngama-ruble angama-62 ngezicucu ezingama-30.
Izinzuzo kanye nokubi kwe-Cardiomagnyl
Ukuvimbela izifo zenhliziyo. Kwenziwa phambi kwezimpawu zobungozi: ukubhema, ukukhuluphala, isifo sikashukela, umfutho wegazi ophakeme, ubudala obuphambili.
Ayina pectoris engasebenzi.
Ukuvimbela i-thromboembolism ngemuva kokuhlinzwa.
Ukuvimbela infarction myocardial.
Ukuvimbela ukuvuselelwa kabusha kwemithambo yegazi.
i-asthma ye-bronchial ebangelwa ukuthatha izidakamizwa ezingezona i-antiidalidalidal kanye nama-salicylates,
ukuphazamiseka kwesistimu ye-hematopoietic (hemorrhagic diathesis, ukusweleka kwevithamini K, i-thrombocytopenia),
izingane ezingaphansi kweminyaka engu-18,
ukuzwela komuntu ngamunye kwizakhi,
ukungahambi kahle komzimba ezingxenyeni zomuthi,
ukungapheleli kwezinso kanye ne-hepatic,
ushukela we-glucose-6-phosphate dehydrogenase,
ukuguguleka kanye nezilonda zesisu, ukopha kwesisu.
kusuka kwipheshana lesisu: izinhlungu ze-epigastric, ukuphazamiseka kwengqondo,
kusuka ohlelweni lwe-hemopoietic: ukopha (inal, gastric nabanye),
kusuka ohlelweni lokuphefumula: i-bronchospasm,
kusuka ohlelweni oluphambili lwezinzwa: ukozela, isiyezi, ukuqwasha, ikhanda, i-tinnitus, i-migraine,
ukungahambi kahle komzimba: ukulunywa, i-urticaria, ukushaqeka kwe-anaphylactic, i-Quincke edema.
Ezigulini ezinezifo zokuphefumula, kubantu abanenkinga yokungezwani komzimba, kanye nasezigulini ezinesifuba somoya, ukuthatha i-Cardiomagnyl kungavusa i-bronchospasm, ukuhlasela kwe-asthmatic, noma ukusabela komzimba kohlobo olusheshayo.
Uma usebenzisa i-Cardiomagnyl ngotshwala, ubungozi bokulimala kwe-mucosa esiswini buyakhuphuka.
Izindleko zesidakamizwa i-Cardiomagnyl ziphezulu kunalezo ezifakiwe. Intengo yokufaka umuthi kumthamo wama-75 mg ngama-ruble ayi-142 ngezingcezu ezingama-30. Kuyinzuzo enkulu ukuthatha iphakethe lezingcezu eziyi-100. Intengo yayo ngama-ruble angama-250.
Yikuphi ukulungisa okungcono ukukhetha
Ayikho impendulo eyodwa kulo mbuzo. Isiguli ngasinye singumuntu ngamunye, njengoba kunjalo nangesifo sakhe. Okufike kwezinye iziguli eziyisishiyagalolunye kungenzeka kungabi nalusizo ngokuphelele kweshumi.
Uchwepheshe oqeqeshiwe kuphela ozokhetha ukwelashwa okuphezulu. Udokotela uzokwenza ukuhlolwa, anikeze izivivinyo ezidingekayo nezivivinyo. Futhi ngemuva kokuxilonga kokugcina, uzokutshela ukuthi yisiphi isidakamizwa esisebenzayo esigulini. Esimweni lapho i-Cardiomagnyl neCardiASK zilungele isiguli, ukhetha ikhambi ngokuya ngokuthanda kwakhe nangesimo sezezimali.
Kubekwa nini futhi nini lezi zimali
I-Acetylsalicylic acid, okuwukusebenza okusebenzayo kwayo yomibili le mishanguzo ecutshungulwayo, kumithamo emincane (50 mg ku-Cardiask no-75 mg kuCardiomagnyl) inomphumela we-antiplatelet. Ivimbela ukuhlanganiswa kwe-cycloo oxygenase I, okuholela ekunciphiseni kokukhiqizwa kwe-thromboxane A2 kanye nokwehla kokuhlanganiswa kweplateletation. Ngaphezu kwalokho, lo muthi unciphisa umsebenzi we-fibrinolytic we-plasma, unciphisa inani lezinto ezihlanganayo kuwo. Ngomthamo ongaphezulu kwama-300 mg, imiphumela ye-antiplatelet ye-ASA iba buthaka. Umphumela wokulwa nokuvuvukala kanye ne-antipyretic womuthi uyathuthukiswa.
Isibonakaliso esijwayelekile sokusetshenziswa kweCardiask neCardiomagnyl zonke izifo ezihambisana nengozi ekhulayo ye-thrombosis. Uhlu lubandakanya:
i-infraction ye-myocardial eyingozi nokuvinjwa kwayo,
ingozi ekhulayo yokushaywa unhlangothi,
isidingo sokuvimbela i-thrombosis esikhathini se-preoperative kanye ne-postoperative yokuqala, ikakhulukazi ngesikhathi sokungenelela emikhunjini emikhulu.
Izinzuzo nobubi be-Cardiask
Enye yezinzuzo eziphambili zeCardiask ngokuqhathaniswa neCardiomagnyl izindleko zayo. Amanani entengo yesidakamizwa emakhemisi enhloko-dolobha ahlukahluka ukusuka kuma-ruble angama-73 kuye kwangama-105. Intengo incike kumthamo. Umuthi uyatholakala kumthamo we-50 mg no-100 mg we-acetylsalicylic acid. Phakathi kokubi kweCardiasca uhlelo lwayo lokwamukela. Umuthi udakwa ngemithamo ephezulu - 100-300 mg nsuku zonke. Lokhu kwandisa ubungozi bomphumela ongemuhle kulwelwesi lwama-mucous lomgudu wesisu.
Inhlanganisela yokufaka enteric inikelwe ukuvikela umgudu wokugaya ukudla. Ngeshwa, lokhu ngeke kuhlukanise ngokuphelele umphumela we-ASA esiswini, ngoba umphumela ongemuhle womuthi ukhula ngemuva kokuthi ungenwe egazini futhi awususwa ngokuphelele ngisho nokuphathwa kwabazali kwama-salicylates. Imithamo ephezulu ye-acid ehlanganiswe nohlelo olwanele lokuvikelwa kwesisu lwenza i-Cardiask ibe yingozi ezigulini ezinezifo ezivuvukelayo nezonakalisayo zohlelo lokugaya ukudla.
Phakathi kwezithiyo ezingafani ne-Cardiac kuphela, ukwakheka kwaso kungabikwa. Ithuluzi liyatholakala ngohlobo lwama-biconvex amaphilisi ayindilinga, angaphandle angafana nezinye izidakamizwa. Njengoba sazi iqiniso lokuthi ama-antiplatelet agents ajwayele ukulethwa iziguli esezikhulile, kubandakanya nalabo abanezifo eziwohlokayo zamasipha we-neva yezinzwa, singakhuluma ngengozi eyandayo yemithi engafanele. Iziguli ezinenkumbulo ephazamisekile noma ukubona zingadida i-Cardiask nezinye izidakamizwa.
I-Cardiomagnyl inezinga eliphakeme lokuhlanzwa, ithathwa njengethuluzi lesimanjemanje neliphephile. Izindleko zokupakisha umuthi ziyahlukahluka kusuka kuma-ruble ayi-137 kuya kwangama-329, okwenza ukuthi kungabizi kakhulu kune-Cardiask. Kutholakala kumthamo ka-75 no-150 mg. Amathebhulethi angama-75 mg abukeka njengenhliziyo efekethisiwe, ebenza babonakale futhi banciphise ingozi yokwamukelwa okuyiphutha. Ifomu lomthamo we-150 mg lenziwa ngendlela yepilisi ye-oval emhlophe.
Umthamo wokwelapha we-Cardiomagnyl uphansi kancane kunowama-Cardiask. Umuthi unikezwa isikhathi esingu-150 mg / 1 ngosuku ngosuku lokuqala lokwelashwa. Okulandelayo, inani lomuthi lehliselwa ku-75 mg / 1 isikhathi ngosuku. I-Cardiomagnyl ithathwa ezifundweni ezinde, imvamisa impilo. Ngaphandle kokuqukethwe okuphansi kwe-ASA, umuthi futhi ubeka usongo empilweni yesisu namathumbu. Ukuvikela ulwelwesi lwama-mucous kusuka kumphumela ocasulayo oyinhloko, i-magnesium hydroxide ikhona ekubunjweni kwamacwecwe. Umphumela ongemuhle we-Cardiomagnyl emgudwini we-gastrointestinal ngemuva kokufakwa kwegazi uphansi kunalowo weCardiask. Lokhu kungenxa yenani elincane lezinto ezisebenzayo.
Inani elincane kakhulu le-acetylsalicylic acid kanye nekhwalithi ephezulu yokuhlanzwa kwezinto ezingavuthiwe zenza kube lula ukuphatha i-Cardiomagnyl ezigulini ezihluleke ngokwezinso. Ithuluzi lingabekelwa imvume ye-creatinine engaphezulu kwe-10 ml / iminithi. Kwi-Cardiask, lesi sibalo singama-30 ml / umzuzu. Ungaphuza umuthi ngaphandle kokudla. I-Cardiask nayo iyanconywa ukuphuza ngaphambi kokudla.
Yini engcono: Cardiask noma Cardiomagnyl?
Ukungezelelwa kwegazi okwandayo akugcini ngokugijimisa ukuhamba kwegazi, kodwa futhi kuyingozi empilweni. Ukutholakala kwe-Intanethi kukuvumela ukuba ujwayelane nezimpawu zezidakamizwa ezahlukahlukene, ngakho-ke umbuzo: "Yini engcono: I-Cardiask noma i-Cardiomagnyl?" Iziguli zibuze udokotela noma uthayiphe kuGoogle. Ukuphendula, udinga ukuzijwayela ngezimpawu eziphambili zezidakamizwa.
Ngaphambi kokuqhathanisa i-Cardiask ne-Cardiomagnyl, ake sibheke ukuthi imiyalo yokusebenzisa mayelana ne-Cardiask ithini.
Isithako esikhulu esisebenzayo somuthi yi-acetylsalicylic acid. Izithasiselo eziqondile ze-Cardiask yi-Aspirin Cardio ne-Acecardol, etholakala ezibhebheni. Umuthi ungowesiqhema sezidakamizwa ezingezona ze-steroidal ezilwa nokuvuvukala.
Ukuze unciphise igazi, i-Cardiask inqunyelwe ama-pathologies alandelayo:
i-thrombophlebitis eyingozi futhi engamahlalakhona,
ukuvimbela i-thrombosis ngesikhathi sokuhlinzwa kwenhliziyo,
ukululama kusenesikhathi kusuka ku-ischemic stroke,
ukuvimbela ukuphinde ubuye emuva kokuhlaselwa yisifo senhliziyo noma unhlangothi,
Kulezi zimo, ukwehla kokubonakala kwegazi nge-Cardiask kusiza ukuthuthukisa ukuhamba kwegazi futhi kuvikele ukwakheka kwezigaba zegazi ezihlasela ngaphakathi emzimbeni.
I-Cardisk ayikwazi ukubekwa uma isiguli sembulile:
isilonda sokugaya ukudla,
ukukhulelwa (kuvumelekile uma owesifazane enqaba ukuncelisa),
isifuba somoya (i-asthma) (ukuhlaselwa i-asthma kuqala lapho kuthatha ama-salicylates),
ukusweleka kwevithamini okubangelwa ukuntuleka kwevithamini K,
umfutho wegazi we-portal
umsebenzi wezinso ongasebenzi kahle,
iminyaka efinyelela kwengu-15.
Imikhawulo yenhliziyo ifaka:
ukuthambekela kokuphendula okwenziwa yi-allergic,
amazinga akhuphukayo e-uric acid egazini (ingozi eyandayo yokuqothuka kwe-gout),
ukuthatha ama-NSAIDs noma izidakamizwa ezinciphisa igazi (ukuphuma kwegazi kungenzeka),
isifo sikashukela i-mellitus (imithamo ephezulu ye-Cardiask izobangela i-hypoglycemia)
uphuzo oludakayo (ukuthatha iCardiask kanye notshwala kukhuthaza ukukhula kokuguguleka kanye nezilonda zendlela yokugaya ukudla).
Lapho ukhomba ukwephulwa okuhlobene, i-Cardiask izama ukungayinqumeli, uyisuse esikhundleni sezidakamizwa ngesakhiwo esehlukile nomphumela ofanayo.
Ngemuva kokuthatha i-Cardiask, umuntu angathola:
ukuphefumula komoya (ukufushane komoya, ukuhlaselwa yisifuba somoya),
Ubuhlungu emathunjini noma esiswini,
ukushaqeka kwe-anaphylactic ne-edema kaQuincke (lezi zimo eziyingozi zikhula ezimweni ezikhethekile),
amakhala nezinye izinhlobo zokopha,
Imiphumela emibi ayivelakancane. I-Cardiask ibekezelelwa kahle yiziguli futhi ishibhile - cishe ngama-70 r ngepakethe lamathebulethi angama-30 ama-50 mg.
Sizophendula ngokulandelana kwayo yonke imibuzo:
Ngabe iCardiomagnyl ivunyelwe ukuphuza ngasikhathi sinye njengeCardiask? Cha, akuvunyelwe. Uma uthatha imithi ndawonye, ​​umuntu uzoba nezimpawu zokuphuza ngokweqile kwe-aspirin (i-bronchospasm, ukopha, njll.). Ukuze uthuthukise umphumela wokwelapha, i-Cardiomagnyl noma i-Cardiask inqunyelwa ukuthi iphuze kanye nezidakamizwa ezinenye into esebenzayo enomphumela wokuncipha kwegazi.
Uyini umehluko. Umehluko oyinhloko emananini nakubungako bento esebenzayo. I-Cardiomagnyl iqukethe i-acetylsalicylic acid ethe xaxa futhi izosebenza kahle. Ngaphezu kwalokho, kusetshenziswa izingxenye ezihlanzwa kakhulu ekwakhiweni kweCardiomagnyl, okunciphisa ubungozi bemiphumela emibi. I-Cardiomagnyl isebenza ngokuqina, kulula ukubekezelela iziguli futhi mancane amathuba okuthi inikeze imiphumela emibi.
Yikuphi okungcono. Kuya ngezimpawu zomzimba ngamunye: I-Cardiask isiza umuntu oyedwa kangcono, kanti iCardiomagnyl isiza omunye. Uhlobo luni lomuthi okufanele lunikezwe unqunywa udokotela. Kepha uma kungekho okuphikisana, futhi udokotela ethi uzothenga omunye wale mithi emibili, ungagcina okuncane ngokuthenga i-Cardiask eshibhile. Kepha ekuvimbeleni, i-Cardiomagnyl izoba ngcono, esebenza ngokuthambile, futhi ibangele ukusabela okumbalwa okuncane.
Kungenzeka ukuthi ungene esikhundleni se-Cardiomagnyl nge-Cardiask. Ungakwenza, kodwa ngaphambi kokufaka esikhundleni udinga ukubonana nodokotela wakho. Uma kunenkambiso yokuphendula kokungezwani komzimba, isibindi nezinso zezinso noma isifo sikashukela, ukusetshenziswa kweCardiomagnyl kuzobe kuphephile kakhulu emzimbeni.
I-Cardiask ne-Cardiomagnyl yizichazi eziqondile, ngakho-ke kunzima ukukhetha ikhambi elingcono kakhulu.Uma udokotela engazange anikeze umuthi owodwa, khona-ke isiguli singazikhethela lowo muthi, siqondiswa yikuthanda komuntu siqu kanye namandla emali.
UVidal: https://www.vidal.ru/d drug/cardiomagnyl__35571
Uthole iphutha? Khetha bese ucindezela u-Ctrl + Enter
Izidakamizwa ezidumile ze-acetylsalicylic acid
I-acetylsalicylic acid ingenye yezinto ezidumile ezisetshenziselwa ukwelashwa kwezifo eziningi. Kuzosiza ukudambisa izinhlungu noma ukuvuvukala, umkhuhlane ophansi, kanye nokuvikela ukuchitheka kwegazi. Yaqala ukwenziwa emuva ngo-1897, kepha isekhona nasezifuyweni zemithi yasekhaya iningi labantu.
Acetylsalicylic acid ekuvimbeleni isifo senhliziyo
I-acetylsalicylic acid ingeyizidakamizwa ezingezona ze-steroidal ezilwa nokuvuvukala zesenzo esingakhethi. Ngenxa yezakhiwo zayo ezihlukile, isetshenziswa kabanzi njengesisekelo ekwakhiweni kwemithi ehlukahlukene. Amagama aziwa njenge-Aspirin, iCitramon, iCardiomagnyl, i-Upsarin, i-Thrombo ACC, i-Acekardol - konke lokhu kungamalungiselelo aqukethe i-acetylsalicylic acid. Futhi lolu akulona uhlu oluphelele. Ngayinye yazo inezimpawu zayo ngokusho kwezinkomba kanye nokusebenza kwayo. Ukuze ungadideki kulolu hlu olunwebekayo, kudingeka ucwaningo lokuqhathanisa lwezidakamizwa ezidumile.
Amalungiselelo ama-5 asuselwa ku-acetylsalicylic acid yenhliziyo nemithambo yegazi
Njengoba kuphawuliwe ngenhla, isilinganiso se-acetylsalicylic acid kwezokwelapha sibanzi kakhulu. Kodwa-ke, ngaphezu kweminyaka eyikhulu yokusetshenziswa, kancane kancane yaguquka yaphenduka impuphu ye-banal yamakhaza namakhanda yaphenduka enye yezindlela eziphambili zokwelashwa nokuvimbela izifo zenhliziyo nezemithambo. Okwamanje, ibaluleke kakhulu ngokunembile ngezakhiwo zayo zamandulo. Ukuze uvikele izifo zenhliziyo ezi-coronary, infarction ye-myocardial, stroke, i-thromboembolism nezinye izifo zenhliziyo nemithambo yegazi, izidakamizwa eziningi zenziwe ngesisekelo sazo. Kulokhu, umuntu onesabelo esanele sokufuna ukwazi angabuza: yini, kuleli cala, umehluko okufanele uwuthathe - uCardiomagnyl, TromboASS noma u-Aspirin Cardio uma ekhonjisiwe cishe amacala afanayo? Impendulo ilula: ngaphandle kokufana, izidakamizwa ezahlukile zinokuhluka kwesibalo sezinto ezisebenzayo, ekwakhiweni kwezakhi ezisizayo nangezindlela zokukhishwa. Lokhu kukuvumela ukuthi ukhethe ngokuqondile umuntu othize umuthi ofanele kakhulu kuye, uthatha izici zomuntu ngamunye nesimo somzimba. Ngezansi kuzobhekwa izici zezidakamizwa ezi-5 ezidumile.
Lesi sidakamizwa sakhiwa futhi senziwa e-Austria. Kukhiqizwa ngesimo samathebulethi anamgobolondo ancibilika endaweni ye-alkaline yamathumbu. Ngenxa yokuba khona kwegobolondo elinjalo, kungenzeka ukugwema kakhulu imiphumela ecasulayo esiswini. Lokhu ngumehluko phakathi kwe-ThromboASS ne-cardiomagnyl, lapho le nkinga ixazululwa ngokuhlukile. Ithebhulethi yomuthi, ngokuya ngesimo sokukhishwa, ingaqukatha ama-50 noma i-100 mg yesakhi esiyinhloko (bheka ithebula elingezansi). Ukwehlukahluka okunjalo kumthamo kukuvumela ukuthi ubheke izici ngazinye zesiguli ngangokunokwenzeka futhi uzuze umphumela omkhulu kusukela ekusebenziseni umuthi. Njengengxenye esetshenziswayo, kusetshenziswa i-lactose, i-colloidal silicon dioxide nesitashi samazambane.
Inani lezinto ezisebenzayo eziqukethwe umuthi azithathwa njengeliphezulu. Ngakho-ke, umphumela wokulwa nokuvuvukala ne-analgesic we-acetylsalicylic acid e-Thrombo ACC ubizwa kabi kune-antiplatelet one. Empeleni, kulapho igama lalesi sidakamizwa livela khona. Inhloso yawo eyinhloko ukunciphisa ukuqina kwegazi.
I-Thrombo ACC isidakamizwa esingabizi ngaphezulu kwezindleko. Ngakho-ke, uma intengo ibalulekile kumthengi, khona-ke, ngokwesibonelo, uma kuqhathaniswa ne-Aspirin Cardio noma iTrombo ACC - ukukhetha kuzoba sobala ngokusobala. Kepha, uma ubheka impilo yeshalofu, khona-ke kwiTrombo ACC iminyaka emi-3, kuyilapho i-Aspirin Cardio iminyaka emi-5.
I-Aspirin igama lokuqala lokuhweba lesidakamizwa i-acetylsalicylic acid. Yaqala ukuthengiswa ngo-1899. Kwaphela iminyaka eminingi, i-aspirin ibekwa kuphela njenge-anti-inflammatory, antipyretic ne-analgesic. Futhi kuphela ngemuva kokuthi, ngemuva kweminyaka yocwaningo, umphumela we-inhibitory we-acetylsalicylic acid ekuhlanganiseni kwe-thromboxane wafakazelwa, waqala ukusetshenziswa njengendlela yokucindezela kwegazi.
Umuthi i-Aspirin Cardio luhlobo lwe-aspirin olwenzelwe ngqo ukuvimbela nokwelashwa kokuhlaselwa yisifo senhliziyo, imivimbo kanye nezifo ezihambisana nokwakheka kwezihibe zegazi. Kwenziwa eJalimane. Umehluko wawo kusuka ku-classical aspirin esezingeni lempahla esebenzayo. Lokhu kungenxa yokuthi ucwaningo selufakazisile ukuthi ukufezekisa umphumela we-antiplatelet wenani elincane ngokwanele le-acetylsalicylic acid kunokuthambisa noma ukushisa ukushisa.
Yini i-cardiask engcono noma i-cardiomagnyl
Ukubuyekezwa ku-Cardiask yezidakamizwa kukhona okuhle kakhulu. Imiyalo yokusebenzisa i-Cardiasca ibika ukuthi lesi sidakamizwa senzelwe ukusetshenziswa isikhathi eside. Ukubuyekezwa kochwepheshe nge-Cardiasca nakho kukuhle. Ngaphambi kokusebenzisa isidakamizwa seCardiask, qiniseka ukuthi uthintana nodokotela wakho. Intengo yeCardiask imaphakathi nama-ruble angama-60.
Ngakho-ke, isihloko se-athikili yethu sizoba ngamalungiselelo we-aspirin, sizochaza izimfanelo zabo eziphambili nokuthi iziphi izincomo ezenzelwe inhloso yabo nokuthi bayalwa kanjani ukuthi bazithathe. Ukuqokwa, umthamo kanye nobude be-aspirin kwenziwa njengokuyalelwa ngudokotela, kunezinkomba kanye ne-contraindication yokusetshenziswa kwayo kumuntu othize.
Imiyalo yokusebenzisa i-Cardiasca
Umuthi udonswa emathunjini amancane. Iqoqo eliphezulu lezinto ezisebenzayo ku-plasma yegazi livela amahora ama-3 ngemuva kokufaka isicelo. Umuthi wokugcina womthamo kanye nomthamo kumele kuvunyelwane nodokotela. Akukho mpendulo ecacile kulo mbuzo, ngoba ziningi izidakamizwa ezifanayo futhi zonke zinezimpawu zazo.
Ukubuyekezwa kodokotela mayelana ne-cardiASK
Akumangazi-ke-ke ukuthi izinhlobo ezikhethekile ze- "inhliziyo" ze-ASA okwamanje zikhiqizwa abakhiqizi bemithi abaningi - basekhaya nabangaphandle. Ngaphezu kwalokho, kumthamo we-100 mg, umuthi wokuqala u-Aspirin Cardio (Germany) noGeneric Aspicor (Russia) akhona emakethe yezokwelapha. I-ASA ingabekelwa iziguli ezinenhliziyo kwamanye umthamo. Kulokhu, njengomthetho, ukukhetha okunengqondo kokufana okulinganayo kuyinkimbinkimbi ngandlela thile.
Ungayithatha kanjani i-cardiomagnyl (i-aspirin, i-thromboass, i-acecardol, i-cardiask, njll)?
Inikeza impendulo evela kubavakashi esizeni - abathengi bomuthi, kanye nemibono yochwepheshe kadokotela ngokusetshenziswa kweCardiomagnyl ekusebenzeni kwabo. I-Analogs Cardiomagnyl lapho kukhona izifinyezo zezakhiwo ezitholakalayo. Kukholelwa ukuthi i-acetylsalicylic acid inezinye izindlela zokucindezela ukuhlangana kweplateletation, okwandisa umkhawulo wayo kwezifo ezahlukahlukene ze-vascular.
Ama-salicylates nama-metabolites awo ngamanani amancane akhishwa ubisi lwebele. Ukudliwa okungahleliwe kwama-salicylates ngesikhathi sokukhipha isisu akuhambisani nokukhula kokungafani kahle kwengane futhi akudingi ukuqeda ukuncelisa ibele. Kodwa-ke, ngokusebenzisa isikhathi eside umuthi noma ukuqokwa komthamo omkhulu, ukuncelisa amabele kufanele kumiswe ngokushesha.
Awukho umphumela weCardiomagnyl ekhonweni leziguli lokushayela izimoto nokusebenza ngamasu wokusebenza. Lezi zinhliziyo zenhliziyo zigwema ukuvimbela kwangempela kwezifo zenhliziyo.
I-TTT akekho noyedwa onenkinga yokuhlaselwa yisifo senhliziyo nezinye izifo zenhliziyo ngalesi sikhathi azange agule (izinhlungu zesikhashana enhliziyweni, ikakhulukazi ngemuva kokuxineka akubalwa, zona uqobo zidlule). Udokotela unqume uCardiomagnyl ngosuku lwesine, izinga lokushaya kwenhliziyo lenyuka, ngaphezu kwalokho, ama-extrasystoles aqala ukubonakala.
Ezimweni eziningi, inani le-Cardiask liphansi kunabalingani balo. Futhi manje, ngemuva kokufunda imiyalo eseCardiomagnyl, ngesaba ukuyamukela. I-Cardiomagnyl ingathathwa ku-trimester yesibili yokukhulelwa futhi kuphela izinkomba eziqinile.
Yini engathatha isikhundla seCardiomagnyl?
I-Cardiomagnyl ine-analogues nayo eye yaboniswa iphumelela ekwelapheni izifo zenhliziyo. Kwi-cardiology, imishanguzo efana ne-Aspirin Cardio, Tromboass, Acekardol, Cardiask, Lopirel, Magnikor, Clopidogrel, Pradax, Asparkam isetshenziswa kabanzi. Le mishanguzo ibekelwa ukuvikela ukuhlukaniswa kwegazi nokwenza ngcono ukusebenza kwemisipha yenhliziyo.
Imiyalo yokusebenzisa i-Cardiomagnyl iqukethe uhlu lwe-contraindication, kufaka phakathi ukuthambekela kokopha kanye nokuba khona kwezinqubo ezigugudlayo ekugayeni kokugaya ukudla.
Lapho kunezimo ezinjalo, umuthi ungashintshwa nezinye izidakamizwa ezingenayo i-acetylsalicylic acid ekwakhiweni.
Ngaphambi kokuthola i-Cardiomagnyl, kanye nama-analogues ashibhile, kubalulekile ukuba uzijwayeze nemiyalo kanye nohlu lwe-contraindication!
Umuthi we-Clopidogrel ukhiqizwa abakhiqizi abaningana baseRussia. Umuthi unomphumela we-antiplatelet futhi usetshenziselwa ukuvimbela ukuhlanganiswa kweplatelet.
I-Clopidogrel ibekelwe ukuvikela lezi zimo ezilandelayo:
Izinkinga ze-thrombotic kubantu abake bahlaselwa i-myocardial infaration kanye ne-ischemic stroke,
izilonda ze-thromboembolic ngemishanguzo, i-fibrillation ye-atrial.
I-regimen yokwelashwa nemithamo yenzelwe udokotela ngokuya ngesimo somtholampilo. I-Clopidogrel ingabekwa kumithamo yesondlo yama-75 mg ngosuku. I-overdose yenzeka lapho kuthatha ngaphezu kwama-300 mg ngosuku.
I-Clopidogrel, i-analogue yeCardiomagnyl, ayisetshenziswa kulezi zimo ezilandelayo:
ukopha kakhulu, kufaka phakathi izinqubo zokulimala kwamalunga nokulimazeka kwe-intracranial,
isiguli silimale kabi isibindi,
ukukhulelwa nokukhipha umunyu
ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-18,
ukuthambekela kokuphendula okwenziwa yizakhi zomuthi.
Imiyalo esetshenzisiwe ikhombisa amathuba emiphumela emibi lapho uthatha i-clopidogrel. Ngaphambi kokufaka esikhundleni seCardiomagnyl nezinye izidakamizwa, kubalulekile ukutadisha izichasiselo ngokucophelela.
IClopidogrel ingadala imibandela elandelayo:
izilonda zesisu zesisu,
ukuwohloka kwesibindi nokuqina kwesibindi,
ushintsho ezibalweni zegazi,
ikhanda kanye ne-cephalgia,
hemoptysis kanye nokopha emaphashini.
Uma uhlangabezana nokusabela okunjalo kulo muthi, kufanele ubonane nodokotela ngokuphuthumayo!
I-Clopidogrel, i-analogue yeCardiomagnyl, ayishibhile. Emakhemisi aseRussia, umuthi ungathengwa ngama-ruble angama-204.
I-Pradax yezidakamizwa ikhishwa isitshalo semithi saseJalimane iBoehringer Ingelheim. Umuthi uqukethe i-dabigatran etexilate, eyi-anticoagulant ne-thrombin inhibitor. Into esebenzayo inamandla okunciphisa umsebenzi wezibalo zegazi ezikhona. I-Pradax inqunyelwe ukuvimbela i-systemic kanye ne-venous thromboembolism, imivimbo.
Umuthi, i-analogue yesidakamizwa i-Cardiomagnyl, sifakwa emthethweni lapho kukhona:
ukungahambi kahle komzimba kwizakhi
ukungasebenzi kahle kwesibindi nezinso,
ubungozi obukhulu bopha lapho kukhona izilonda zokulimala zendlela yokugaya,
i-valve yenhliziyo yokufakelwa.
Umuthi awukwazi ukusetshenziswa ndawonye namanye ama-anticoagulants, kanye ne-intraconazole ne-ketoconazole.
I-Pradaxa, njengamanye ama-analogues, ingadala imiphumela efana ne-:
ukuthuthukiswa kokulimala nokopha kusuka emanxebeni, umgudu wokugaya ukudla,
ukuvela kwe-bronchospasm kanye mzio ngesimo se-urticaria kanye nokuqhuma,
ukuphazamiseka kwendlela yokugaya ukudla, kuboniswe ngesimo sohudo, izinhlungu, isicanucanu, i-dysphagia.
Umthamo wansuku zonke akufanele udlule ngaphezu kwama-300 mg. Kuyalulekwa ukuthatha lo muthi kabili ngosuku. Uhlelo lolu luqanjwa ngudokotela ohambisana nezinkomba kanye nokuba khona kwezifo ezingamahlalakhona.
Izindleko zePradaxa, i-analogue yesidakamizwa i-Cardiomagnyl, zingama-ruble angama-684.
I-Asparkam yezidakamizwa ikhiqizwa yizinkampani eziningana zemithi zaseRussia. Umuthi uqukethe i-magnesium ne-potasium asparaginate. I-Asparkam yakhelwe ukulawula izinqubo ze-metabolic emzimbeni kanye nokubuyisa ibhalansi yama-electrolyte. Umuthi usiza ukunciphisa ukugeleza kanye nokuqina kwesicubu senhliziyo, unesakhiwo esilinganiselayo se-antiarrhythmic, sithuthukisa ukujikeleza kwe-coronary. I-Asparkam ibekiwe hhayi nje ukuthuthukisa izinqubo ze-metabolic, kodwa futhi nokulungisa amandla e-metabolism emisipha yenhliziyo ye-ischemic.
Izinkomba zokusetshenziswa kwomuthi, i-analogue eshibhile yesidakamizwa Cardiomagnyl, yile:
ukuba khona kokwehluleka kwenhliziyo,
isimo ngemuva kokuhlaselwa yinhliziyo,
izimo ezihambisana nokuncipha kwe-magnesium yegazi noma i-potassium.
I-Asparkam isiza ukuthuthukisa ukubekezelelana kwe-glycoside yenhliziyo, kunciphisa ubungozi be-cerebrovascular pathologies.
Umuthi awusetshenziswa phambi kwale mibandela elandelayo:
ukwehluleka okuphezulu kwezinso,
i-hypermagnemia kanye namazinga aphezulu we-potassium egazini,
acute metabolic acidosis,
ukomisa kanye ne-hemolysis.
I-Asparkam ezimweni ezingavamile ibangela ukuphazamiseka kokugaya ukudla, ukusabela komzimba, i-hyporeflexia, izimpawu ze-hypermagnemia. Ukuze ugweme amazinga aphezulu ama-electrolyte esegazini, umthamo wansuku zonke kufanele uhlukaniswe ngemithamo eminingi. Uma kuvela izimpawu ze-hyperkalemia, i-Asparkam kufanele iyekwe! I-overdose iyingozi ngokudangala komoya kanye nemisebenzi yezinye izitho.
Izindleko ze-Asparkam, i-analogue eshibhile yesidakamizwa i-Cardiomagnyl, emakhemisi aseRussia ama-ruble angama-35.
I-Cardiomagnyl, kanye ne-analogues yayo, kunqunywa kuphela ngemuva kokuhlolwa kweziguli ngokuphelele. Kuyadingeka ukutadisha ngokucophelela imiyalo yomuthi futhi ungafaki amathuba emiphumela emibi. Zonke izidakamizwa, izinkomba zesidakamizwa i-Cardiomagnyl, zinokuphikisana. Uma kwenzeka kuba nemiphumela emibi ngemuva kokuphuza amaphilisi, qiniseka ukuthi uthintana nodokotela!
Izifo zenhliziyo nemithambo yegazi inesikhundla esiphambili ezilinganisweni zezifo eziholela ekufeni. Ithemba elinjalo elibuhlungu lilindele cishe wonke umuntu ongumhlali wesithathu woMhlaba.Ochwepheshe bezenhliziyo bathanda ukubhekana nezifo zenhliziyo ngosizo lwemithi ehlukahlukene. Ezinye zalezi ngu-Aspirin Cardio noCardiomagnyl. Uyini umehluko phakathi kwalezi ezimbili? Kungabonakala kwabaningi ukuthi le mishanguzo ifana ngokufana, kepha akulona iqiniso iqiniso lelo.
I-Cardiomagnyl ingeyeqembu lezidakamizwa ze-antiplatelet, ezisetshenziselwa ukuvimbela izifo zenhliziyo. Lesi sidakamizwa singavimbela ukukhula kwezinkinga ezibangelwa yilezi zifo.
I-Aspirin Cardio nayo iyisidakamizwa esine-antiplatelet action. Yisidakamizwa esingeliso se-steroidal sokulwa nokuvuvukala esisuselwa ku-acetylsalicylic acid (ASA). Ngokuhambisana nalokhu, i-Aspirin Cardio iyakwazi ukunciphisa ukushisa komzimba okuphezulu futhi iveze umphumela we-analgesic.
Zombili lezi zidakamizwa zenzelwe ukwehlisa ukuhlangana kweplatelet. Ngamazwi alula, i-ASA iyakwazi ukuncipha igazi, elinomphumela onenzuzo emithanjeni yegazi evalelwe i-cholesterol embi. Lapho igazi likhulu kakhulu, kuba nzima kulo ukuhamba ngemithambo embozwe ngama-atherosclerotic plaque. Uma izindwani ezinjalo ziqala ukuqwabelana, khona-ke ngokuhamba kwesikhathi amafomu egazi esitsheni. Vele iba imbangela yokushaywa unhlangothi nokushaya kwenhliziyo. Enye imbangela yokushaywa unhlangothi ingaba yimikhumbi ebuthakathaka futhi ebuthaka.
Ziwuthinta kanjani umzimba?
Ngemuva kokuphuza iphilisi, i-ASA igxilwa emgodini wokugaya ngejubane eliphezulu. Lapho inqubo yokungena ngokuqondile yenzeka, i-ASA iguqulwa ibe yi-metabolite yayo eyinhloko - i-salicylic acid.
Iningi lazo lilolongwa esibindini, ngoba lo mzimba ukhiqiza ama-enzyme athile.
Ukunaka! Ukuphuzwa kwento esemqoka kwabesifazane kuhamba kancane kunasemadodeni. Lokhu kungenxa yomsebenzi we-enzyme ophansi.
Iqoqo eliphakeme le-ASA livela emizuzwini eyi-10-20. Uma sikhuluma nge-salicylic acid, khona-ke ifinyelela ekuqoqweni okuphezulu kuphela ngemuva kwemizuzu engama-30-120.
Amathebhulethi e-Cardiomagnyl ahlanganiswe nensimbi yokuvikela evikela kuphela kuyi-duodenum, ebambezela ukumuncwa.
Imvamisa, iziguli zimane zingazi umehluko phakathi kweCardiomagnyl ne-Aspirin Cardio. Abantu abaningi bacabanga ukuthi banokwakheka okufanayo, kepha lokhu akulona iqiniso ngokuphelele. Kuyiqiniso, isithako esisebenzayo kuzo zombili lezi zidakamizwa yi-aspirin, kodwa ukuhlangana kuyaphela lapha. I-Cardiolmagnyl isabhekwa njengendawo yonke, ngoba ngaphezu kwalokho iqukethe i-magnesium hydroxide - i-antacid.
I-Magnesium hydroxide yenza umsebenzi obalulekile - imboza izindonga zesisu, izivikele.
Kubalulekile! I-ASA iyakwazi ukuthinta kabi i-mucosa esiswini. Uma uthathwe ngokungafanele, ama-pathologies asesiswini namathumbu angakhula, aze akhuphule i-gastritis noma izilonda.
Ukuvimbela umphumela omubi kangako we-acid, i-antacid yangeniswa ngokukhethekile kwi-Cardiolmagnyl, evikela i-mucosa. I-capsule yalesi sidakamizwa ihlanganiswa negobolondo elikhethekile elingavezwanga ujusi wesisu.
Akuwenzi mqondo ukusebenzisa lezi zidakamizwa zombili ngasikhathi sinye, ngoba zombili zihlose ukuqinisa inhliziyo. Ochwepheshe bezenhliziyo batusa ukusebenzisa i-Aspirin Cardio ezinkingeni zemikhumbi, futhi basebenzise iCardiomagnyl ukuqinisa inhliziyo okujwayelekile. Akusizi ngalutho ukwenza ukwelashwa okuzimele ngale mishanguzo, kungcono ukuthola ukubonisana nodokotela ozonikeza inkambo yokwelashwa.
Izinkomba zokusetshenziswa kwalezi zidakamizwa:
Thayipha 1 bese uthayipha isifo sikashukela esingu-2
Izinkinga zokujikeleza emithanjeni yobuchopho,
Umfutho wegazi ophakeme
I-atherosulinosis yemithambo yegazi.
Abanye odokotela banquma le mishanguzo ngesikhathi sokuvuselelwa komhlaba ngemuva kokuqunjelwa yi-myocardial infarction, stroke, kanye ne-hypertensive emergency. Ngokwehlukana, kuyaphawuleka ukuthi ngemuva kokungenelela kokuhlinzwa emithanjeni, kusengcono ukusebenzisa i-Aspirin Cardio, ngoba lesi sidakamizwa sengeza ukunciphisa ubuhlungu nokuvuvukala.
I-Cardiomagnyl umuthi ovela eqenjini lezidakamizwa ezilwa nokuvuvukala kwe-antiplatelet. Isithako esikhulu esisebenzayo yi-acetylsalicylic acid, enemiphumela eminingana ebanzi:
ikhulula inqubo yokuvuvukala futhi ibuye ivume ukuvuselelwa kwezicubu,
kunciphisa umkhuhlane futhi kususe izimpawu zomkhuhlane,
igxilisa igazi futhi inomphumela oqinisa imithambo yegazi.
I-Cardiomagnyl umuthi ovela eqenjini lezidakamizwa ezilwa nokuvuvukala kwe-antiplatelet.
Ngaphezu kwalokho, kufakwa i-magnesium hydroxide, isitashi samazambane, iseli, isigaxa sombila, i-talc ne-propylene glycol. I-Cardiomagnyl isetshenziswa kabanzi ukuvimbela izifo ezahlukahlukene zenhliziyo. Ukukhishwa ifomu - amaphilisi. Izinkomba eziphambili ezisetshenziswayo:
ukuvimbela ukufakwa kwe-myocardial in ukwehluleka kwenhliziyo,
Ukuvimbela i-CVD ngohlobo lwesifo se-coronary artery isifo,
ukuvimbela i-thromboembolism, i-thrombosis, isifo sokuqina kwemithambo yegazi, imithambo ye-varicose, njll.
Abantu abakhuluphele ngokweqile bavame ukugula ngenxa yezifo zenhliziyo, ukugeleza kwegazi labo kuyaphazamiseka, ukuphefumula kuyenzeka, futhi izicubu zenhliziyo ilahlekelwa yikhono lokuvikela inzalo ngokuhamba kwesikhathi. Ngakho-ke, kunconywa ukuthi i-Cardiomagnyl ithathwe kaningana ngonyaka ukuze izivikele ekuthuthukisweni kwama-pathologies angaba khona.
Ukuxhumana ngokuthatha lesi sidakamizwa:
izifo ezingapheli zesisu,
isifo sikashukela mellitus
hypersensitivity kuzakhi zokwakheka,
Umthamo wesidakamizwa unqunywa ngokuhlukile esigulini ngasinye, ngakho-ke ngaphambi kokusebenzisa kubalulekile ukuthi uvakashele udokotela wezifo zenhliziyo, udokotela oyi-phlebologist noma udokotela ohlinza ngemithambo.
Umphumela wezidakamizwa kokukhulelwa
I-Cardiomagnyl, noma isidakamizwa esifanayo - I-Aspirin Cardio - ifikelwa emzimbeni. Lezi zinto ezikwi-trimester yokuqala yokukhulelwa zingathinta ukukhula kwesibeletho. Imvamisa, ukungena okungalawulwa okunjalo kungaholela ekukhuleni kwesifo senhliziyo yengane namanye ama-pathologies, ngokwesibonelo, ukuhlukaniswa kwesikhumba esingaphezulu. Izinyanga ezintathu zokuqala ukuthatha izidakamizwa ze-analgesic ziyaqinisekiswa.
Ukuthatha amaphilisi ngesikhathi sokukhulelwa
Kwi-trimester yesi-2, ungaphuza amaphilisi anjalo kuphela ngaphansi kokubhekelwa ngudokotela okuqinile. Ukunquma kuvunyelwe uma inzuzo kumama ibona ubungozi enganeni.
Ukunaka! Azikho izifundo eziqinisekisa ukuphepha kwemithi echaziwe, ngakho-ke akunakwenzeka ukusho izinzuzo zazo ngalesi sikhathi.
Kwi-trimester yesi-3, i-Cardiomagnyl ne-Aspirin Cardio emazingeni aphezulu bayakwazi:
vusa ukuphuma kwesibindi kwengane,
bangela ukopha isikhathi eside kumama,
vimbela ukuvalwa kwe-Botallov duct enganeni.
Uma umuthi olula we-analgesic uthathwa ngenkathi uncelisa ibele, khona-ke emithini emikhulu kungalimaza nengane. Uma ukwamukela kungashadile futhi ku-umthamo omncane, khona-ke ingozi enganeni ayifakwa.
I-CardiASK ingeyeqembu lezidakamizwa ezingezona ze-antiidal. Kunqunyelwe iziguli ezinezifo ezilandelayo:
ukufiphaza kokuqina kokuqina (ukwehluleka kwenhliziyo ngezikhathi ezithile),
isifo samathambo esine-atherossteosis,
ezinye izindlela zesistimu yenhliziyo.
Futhi, umuthi unqunywe ngemuva kokuhlinzwa ukuvimbela i-thrombosis kanye nemithambo ye-varicose.
Ngaphambi kokusebenzisa, bonisana nochwepheshe. Ngaphandle kokuqokwa kwe-cardiologist noma i-phlebologist, awukwazi ukuthatha lo muthi. I-acetylsalicylic acid ngamanani amakhulu icasaza ukopha kwangaphakathi, ngakho-ke, ngaphambi kokusebenzisa, udinga ukuzijwayeza konke ukubhekelana nezingozi ezingaba khona. Ngaphambi kokusetshenziswa kokuqala, kunconywa ukwazi ukuphendula ezingxenyeni ezithile ukuqinisekisa ukuthi akukho ukungahambi kahle.
Umuthi ojwayelekile we-antiplatelet kwezinye izimo ungadala ukonakala enhlalakahleni. Imiphumela emibi ivezwa ikakhulukazi uma umthamo ungabhekwa. Imiphumela engaba khona:
ukuqubuka nokubomvu kwesikhumba,
ukwethuka kwe-anaphylactic (izimo ezingathi sína).
Ekukhuleni kokuqala kwenhlala-kahle, kufanele ufune usizo lodokotela.
Ukuqhathaniswa kweCardiomagnyl neCardiasca
Izidakamizwa zithathwa njengezimpawu, ngakho-ke, zivame ukuthatha indawo esikhundleni sazo.
Ukufana kwezidakamizwa kulele kusisekelo sezenzo zabo. I-Acetylsalicylic acid ivimbela ukwakheka kwama-enzymes we-Pg abandakanyeka ekuvukelweni kokuvuvukala. Ngaphezu kwalokho, zombili lezi zidakamizwa zinomphumela onamandla ohlelweni lwegazi. Bayakwazi ukuba namapuleti amancane, ngenxa yokuthi igazi liba yinto evamile. Lokhu kusiza ukwenza ngcono ukujikeleza kwegazi, kuvimbela ukwakheka kwe-emboli, okubangela i-pathologies ehlukahlukene yenhliziyo.
Imvamisa, iziguli zinquma zodwa ukuthi zithenge i-analogue yesidakamizwa esijwayelekile, ngoba zicabanga ukuthi awukho umehluko omkhulu ekwakhiweni, kepha lokhu akunjalo. Abanye banaka izindleko eziphansi zomuthi ofanayo, bakhohlwe mayelana nokuphikiswa okungenzeka noma umthamo ongalungile.
Kubalulekile! Faka umuthi obekiwe nge-analogue kuphela ngemvume kadokotela oholayo.
I-Aspirin Cardio ithathelwa indawo nemithi elandelayo:
Kuzo zonke lezi zidakamizwa, isakhi esiyinhloko i-ASA, kepha sonke sithinta i-mucosa esiswini ngezindlela ezihlukile.
Ngokuqondene neCardiomagnyl, ingashintshwa nguMagnikor noKombi-Buza. Lama-analogues angaqhathaniswa kalula ngokwakhiwa kweCardiomagnyl, ngoba ziyefana.
Umuthi wanamuhla usiza ukuvikela izifo ngokukhomba izingozi. Kepha kufanele wenzeni ngalolu lwazi? Isibonelo, isiguli sinamazwibela kusengaphambili. Kulokhu, akadingi nje ukuguqula indlela yakhe yokuphila, kodwa futhi nokusiza umzimba ngosizo lwemithi. Futhi kaningi ngezinhloso ezinjalo, iCardiask inqunyelwe.
Kungenxa yakhe ukuthi sizokhuluma kulesi sihloko. Ngakho-ke, ake sibheke imiyalo yokusebenzisa i-Cardiask, intengo yayo, ama-analogues nokubuyekezwa kodokotela ngakho.
I-CardiASK isidakamizwa esifuywayo, kanti i-Cardiomagnyl ingumuthi wakwelinye izwe (Norway). Umehluko omkhulu inani lezithako ezisebenzayo. I-Cardiomagnyl iqukethe i-acetylsalicylic acid ethe xaxa, okusho ukuthi isebenza ngempumelelo ukwedlula ozakwabo baseRussia. Ngenxa yezinga eliphakeme lokuhlanzwa kwezakhi zamakhemikhali zokwakheka, ubungozi bemiphumela emibi eCardiomagnyl uphansi kakhulu.
I-Cardiomagnyl Itholakala Ukufundiswa I-Cardiomagnyl Instruction Cardi ASK Ukufundiswa
I-Cardiask yisidakamizwa esingeliso se-steroidal elwa nokuvuvukala esithinta ngokuqinile izici zokwakheka kokuhlaselwa yisifo senhliziyo, kanye nezimo ezifanayo. Umuthi usebenza kakhulu, unesikhathi esifanele sokuhoxisa, uhlanganiswe nezidakamizwa eziningi zesimanje.
Isithako esisebenzayo eCardiask yi-acetylsalicylic acid, ethebuleni eli-1 iqukethe ama-50 noma ama-100 mg, kuye ngomthamo. Okokugcwala okungcono kanye nokugcinwa kwefomu, izinto ezisizayo njenge:
Ukwakheka kwengqimba yefilimu yeCardiac kufaka phakathi i-methacryl Copolymer. kuwe ne-ethyl acrylate, talc, titanium dioxide, Copovidone nezinye izinto.
Izindleko zezidakamizwa zingahluka ngokuya ngomkhiqizi noma iphuzu lokuthengisa. Intengo yeCardiomagnyl ingaphezulu kuneCardi ASK. Lokhu kungenxa yezwe elikhiqizayo. Izindleko ezilinganisiwe zezidakamizwa:
I-Cardiomagnyl 75 + 15.2 mg No. 30 - 150 rub.,
I-Cardiomagnyl 150 + 30.39 mg No. 30 - 210 rubles,
I-CardiASK 100 mg No. 60 - ama-ruble angama-110.,
I-CardiASK 100 mg No. 30 - 75 ruble.
Yikuphi okungcono: I-Cardiomagnyl noma i-Cardiask
Umuthi wesibili une-acetylsalicylic acid ephezulu, ngakho-ke usebenza kahle kakhulu. I-CardiASK ibekelwe iziguli ezinobungozi obukhulu bokusabela okungekuhle. Ngaphezu kwalokho, izakhi zeCardiomagnyl ezikhiqizwe eNetherlands zithola ukuhlanzwa okuphindwe kathathu, ngenxa yokuthi zinomthelela ongemuhle kwipheshana lesisu ngokuqhathaniswa neCardiASK.
Ngaphambi kokusebenzisa noma iyiphi yezidakamizwa, kuyadingeka ukuthi ufundisise ukusebenzelana kwezidakamizwa, ngoba izidakamizwa eziningana ezisuselwa ku-ASA azikwazi ukusetshenziswa ndawonye ngenxa yengozi eyandayo yokusebenzisa ngokweqile izidakamizwa.
UMarina Ivanova, oneminyaka engama-49, eMoscow
Ngemuva kwe-infraction ye-myocardial, ngibhekwa ngudokotela wezenhliziyo futhi njalo, kabili ngonyaka, ngiya esibhedlela ukuyovinjwa. Kuqala uthathe i-CardiASK ekhaya, kepha kolunye ucwaningo kwavela ukuthi isibindi sesonakele. Ngemuva kwalokhu, uCardiomagnyl wanqunywa. Kuyabiza kancane, kodwa kunganikeli imiphumela engemihle, bengilokhu ngisebenzisa lo muthi iminyaka eminingana. Ngigculisekile: umfutho wegazi ophakeme awuhlukumezi, ikhanda alilimazi, imikhumbi ayenzi “ukudlala amaphara”.
U-Irina Semenova, oneminyaka engama-59, uKrasnoarmeysk
Bengilokhu ngithatha i-Cardiomagnyl iminyaka engaphezu kwengu-5, ngoba Ngi-pathologies yomzimba omningi futhi omile. Ngalesi sikhathi, izinga lokushaya kwenhliziyo libuyele kokujwayelekile, ukufupheka komoya ngesikhathi sokuhamba kwehla. Umuthi awunemiphumela emibi lapho uthathwa kahle. Umuthi wami wawungatholakali kabili, futhi uthathe i-analogue kwa-ASK CardiASK. Angiqaphelanga umehluko, zombili lezi zidakamizwa ziyasebenza.
I-Cardiomagnyl iqukethe i-acetylsalicylic acid ethe xaxa, okusho ukuthi isebenza ngempumelelo ukwedlula umlingani wayo waseRussia.
Ukubuyekezwa kodokotela nge-Cardiomagnyl ne-Cardiask
U-Yazlovetsky Ivan, udokotela wezifo zenhliziyo, eMoscow
Zombili lezi zidakamizwa zikhombise izidakamizwa ezisebenzayo ezisuselwa ku-ASA. Banciphisa igazi, ngaleyo ndlela banciphise ingozi yokuqhekeka kwegazi. Angikwazi ukusho ukuthi yisiphi isidakamizwa esingcono, ngoba yonke into iyodwa futhi incike hhayi emzimbeni wesiguli kuphela, kodwa nasenkingeni. Ngemuva kokuhlaselwa yisifo senhliziyo, ngincoma uCardiomagnyl ukuvikela ukubuyela emuva. Futhi ekwelapheni imithambo ye-varicose noma i-thrombosis, kungcono ukusebenzisa i-CardiASK.
UTovstogan Yuri, isazi se-phlebologist, iKrasnodar
I-Acetylsalicylic acid iyisakhi esisebenzayo sokwenza ngcono ukuhamba kwegazi nokuqinisa izindonga zemithambo yegazi. I-Cardiomagnyl imvamisa ibekelwa iziguli zami ukuvikela izifo zohlelo lwethambo nenhliziyo. I-CardiASK isetshenziswa kakhulu ngesikhathi sokwelashwa, kunokuvikela.
I-Cardiask yisidakamizwa sokulwa nokuvuvukala esingelona le-steroidal kanye ne-antiplatelet. Isenzo se-Cardiask sisuselwa kokungasebenzi okungaphendukiyo kwe-enzme ye-COX-1. Lokhu kusabela kuvimba ukwakheka kwe-thromboxane A2 kanye nokuvimbela iplatelet fusion.
Ngaphezu komphumela omkhulu, lesi sidakamizwa sine-anti-inflammatory, futhi sibuye sikhulule umkhuhlane futhi sinomphumela obuthakathaka we-analgesic.
Isithako esisebenzayo somuthi simunca amathumbu amancane. Ukuhlushwa okuphezulu egazini kufinyelelwa ngemuva kwemizuzu engaba ngu-180. ngemuva kokuthatha iphilisi. I-acetylsalicylic acid engaphelelwanga isetshenziswa kwisibindi.
Umuthi udlulwa yizinso, ngenkathi ukwakheka kwawo kungaguquki. Ukuphuma kwe-acetylsalicylic acid cishe imizuzu eyi-15, kuma-metabolites, umphumela kungamahora ama-3.
Sizosho ukuthi iCardiask isiza ini kusuka kuphi.
I-Cardiask ibekelwa ukuvimbela ukuphathwa kabi kwe-myocardial infarction (kufaka phakathi okuphindaphindwe), uma isiguli sinezici ezibhekisa phambili ekukhuleni kwayo, ngokwesibonelo, isifo sikashukela noma. Futhi, umuthi ungabekelwa:
ukuvimbela, ukuphazamiseka kokujikeleza kwengqondo ebuchosheni, i-thromboembolism,
izindlela zokuthintela zemithambo ejulile futhi,
I-Cardiask akufanele idakwe ngesikhathi sokukhulelwa, okubaluleke kakhulu kuma-trimesters wokuqala nowesithathu. Ama-salicylates kwimithamo engaphezulu kwesilinganiso angakhuphula imvamisa yamaphutha ekuthuthukiseni umbungu, ikakhulukazi, uholele kuwo. Kwi-trimester yesibili, umuthi ungabekwa kuphela ezimweni lapho inzuzo izoba phezulu kakhulu kunokulimaza ingane. Ngemuva kwalokho kuyadingeka ukulawula ukuthuthukiswa kwemiphumela emibi futhi ukuyeka ngokushesha ukuyithatha uma kwenzeka. Kwi-trimester yesithathu, i-salicylates inhibit labour, ikhuphula ukopha, futhi kungaholela ekutheni i-intracranial hemorrhage enganeni.
Ama-salicylates nezinto eziphuma kuwo adalulwa ngokuqunjelwa lubisi, kepha ngemithamo emincane. Ukuphuza ngengozi ngeke kuthinte ingane, noma kunjalo, isikhathi eside kudinga ukunqanyulwa kokuncelisa ibele.
Umuthi awunqunyelwe ukusinikeza izingane nentsha engaphansi kweminyaka engu-18.
Umuthi weCardisk ungasetshenziswa kuphela njengoba kuyalelwe udokotela wakho. Imininingwane elandelayo ithatha indawo yemiyalo ekhethekile kwimiyalo:
Ngomthamo ophansi, umuthi ungadala i-gout ezigulini ezine-excretion encishisiwe ye-lactic acid.
Ngokuhambisana ne-methotrexate, ubungozi bemiphumela emibi luyanda.
Imithamo ephezulu inomphumela we-hypoglycemic.
Ukuphatha ngokubambisana ne-Ibuprofen akunconyiwe, ngoba kunciphisa umphumela we-Cardiask.
Ngaphambi kokuthatha isinqumo sokuthi yikuphi okungcono - "I-Cardiomagnyl" noma "Aspirin Cardio" - udinga ukuzijwayeza ukwakheka, izinkomba kanye nokuphambana kwezidakamizwa. "I-Cardiomagnyl" iyi-ejenti ye-antiplatelet evimbela ukwenzeka kwe-pathologies yenhliziyo nemithambo yegazi nokuxinana. I-Aspirin ne-Aspirin Cardio yimithi elwa nokuvuvukala, i-analgesic, ne-igazi elinciphisayo engeyona i-steroidal engadambisa umkhuhlane. Amalungiselelo amathathu ahlukile ekwakhekeni: aqukethe i-acetylsalicylic acid, kepha izakhi ezihlukile zokulekelela. Isibonelo, eCardiomagnyl kune-magnesium hydroxide, evumela ukuthatha umuthi isikhathi eside ngaphandle kokuthinta i-mucosa yesisu.
Ukuqhathanisa ukwakheka kwezidakamizwa
Yini esiyaziyo ngeCardiomagnyl no-Aspirin Cardio? Owokuqala ungoweqembu lezidakamizwa ezinganikeza umphumela omuhle kakhulu wokuvimbela futhi uvimbele ukuthuthukiswa kwezinqubo ze-pathological ohlelweni lwezinhliziyo, futhi futhi unciphise nengozi yezinkinga ezingaba khona. Ngokwesenzo seCardiomagnyl - isidakamizwa se-antiplatelet.
I-Aspirin Cardio umuthi weqembu elihluke ngokuphelele. Lesi sidakamizwa sithathwa njenge-ejenti ye-antiflogistic kanye neqembu elingelona i-steroidal, libhekwa njenge-non-narcotic analgesic. Ukusetshenziswa kwe-Aspirin Cardio ekwelashweni kunikeza umphumela onamandla we-analgesic, kuqeda izinga lokushisa lomzimba eliphakeme, futhi kunciphise izinga lokuthuthuka kweziqalo zegazi.
Umehluko omkhulu phakathi kwe-Aspirin Cardio ne-Cardiomagnyl ukwakheka kwayo. Isisekelo (futhi esisebenzayo) kuzo zombili izidakamizwa yi-acetylsalicylic acid. Kepha iCardiomagnyl, ngaphezu kwaleli acid, iqukethe ne-magnesium hydroxide, engondla imisipha nezicubu zenhliziyo nemithambo yegazi. Ngakho-ke, yi-Cardiomagnyl ebekelwe iziguli ezine-pathologies ezinzima zesistimu yehliziyo nenhliziyo. Futhi kwiCardiomagnyl kukhona i-antacid - into evikela i-mucosa esiswini emiphumeleni ebhubhisayo neyingozi ye-acetylsalicylic acid, futhi ngenxa yalokho lesi sidakamizwa singathathwa kaningi, ngaphandle kokwesaba ukulimaza umgudu wokugaya ukudla ngokuvamile nesisu ikakhulukazi.
Uma ufunda imiyalo ye-Aspirin Cardio neCardiomagnyl, ungabona ukuthi le mishanguzo inezimpawu eziningi ezizuzisayo. Isibonelo, yomibili imikhiqizo yezokwelapha inganciphisa kakhulu ingozi yokuhlaselwa yisifo senhliziyo kanye ne-thrombosis; zisebenza njengezidakamizwa zomphumela onenzuzo kakhulu ekuvinjelweni kwemivimbo. Kodwa-ke, umehluko phakathi kwezidakamizwa uzobonakala uma ufunda izinkomba zokuzisebenzisa.
Ngakho-ke, isibonelo, u-Aspirin Cardio uphakathi kobufakazi bakhe:
Ukuvimbela i-thrombosis ne-thromboembolism.
Ukwelashwa kwe-pathologies yezinhliziyo ku-mellitus yesifo sikashukela.
Umuthi ungabekelwa ukukhuluphala nokukhubazeka ekusakazweni okunempilo kobuchopho.
Ochwepheshe bathi ukusetshenziswa kwe-Aspirin Cardio kulungisiswe kakhulu ngemuva kokuhlinzwa emithanjeni yegazi, ngoba umuthi, ngaphezu komphumela omuhle ozuzisayo, unomphumela omuhle kakhulu wokulwa nokuvuvukala kanye ne-analgesic, futhi ngenxa yesenzo esinjalo esiyinkimbinkimbi se-Aspirin Cardio, ubungozi bezinkinga obukhona buncishiswa kakhulu.
I-Cardiomagnyl ivame ukubekwa kulezi zimo ezilandelayo:
Uhlobo olubi lwe-myocardial infarction.
Ngengozi ekhulayo yokwakhiwa kabusha kwezigaba zegazi.
Nge-cholesterol eyeqile emikhunjini.
Izazi zezenhliziyo zeluleka ukusebenzisa lesi sidakamizwa njenge-prophylactic ngokumelene nanoma iyiphi i-pathologies yesistimu yethambo, kanye nokuvimbela ukuphazamiseka endaweni yokujikeleza kwe-cerebral.
Akunakwenzeka ukuphendula ngokungathandeki umbuzo wokuthi yisiphi isidakamizwa esingcono - i-Aspirin Cardio noma i-Cardiomagnyl. Iziphetho zingenziwa kuphela ngemuva kokuphasa ukuhlolwa okuphelele kwezokwelapha, kudlule zonke izivivinyo nokubonisana okuningiliziwe nodokotela wezinhliziyo.
Ukuphambana okungenzeka kube yi-Aspirin Cardio ne-Cardiomagnyl
I-Aspirin Cardio inqatshelwe ngokuphelele ukuthi isetshenziswe phambi kwesiguli esinesilonda se-peptic kanye nezinye izindlela zesisu. Kulokhu, kuzokwaluleka ukuthi ungawususa lo muthi nge-Cardiomagnyl noma ama-analogues awo. Okunye futhi ukwephulwa kokuthatha i-Aspirin Cardio yile:
Ukwehluleka kwenhliziyo okukhanyayo.
I-Cardiomagnyl nayo ayivunyelwe ukusetshenziswa ku-asthma, ukuthambekela kopha kakhulu, kanye nokwehluleka kwezinso, ukubambezeleka okukhulu kwemisipha yenhliziyo.
Ukuphetha i-athikili, siphawula ukuthi isinqumo sokuthatha noma iyiphi yalezi zidakamizwa angeke sakwazi ukuzimela: ungathatha uCardiomagnyl no-Aspirin Cardio kuphela ngokuyalelwa udokotela.
I-Diuretics: uhlu lwezidakamizwa, indlela yokusebenza
Can noma cha cranberries kanye currants nge pancreatitis
I-insulin esebenza ngokufushane: imiyalo esetshenziswayo, ithebula lokungenisa
Shiya Amazwana Wakho
Ukushisa kwenhliziyo nge-gastritis
I-Chlorhexidine Spray: Imiyalo esetshenzisiwe
Izimpawu zokuphakama kwegazi kwabesifazane
I-Glurenorm: inani, ukubuyekezwa kwabanesifo sikashukela mayelana namathebulethi, imiyalo yokusebenzisa
Uyini umehluko phakathi kwe-glucose noshukela nokuthi ungakudlulisa kanjani ukuhlaziya?
Isoso seMac Big segama elifanayo
Ukulawulwa kwesifo sikashukelaAmamitha kashukela egaziUkuhlaziyaOkunyeIngcindeziImithiUkunakekelwaInsulinUkuxilongaImibuzo
Izihlavu zeSteam Steed
Ukudla ngesifo sikashukela, 2018
Ukhukhamba notamatisi ekudleni kwe-pancreatitis
Izindlela zokwelapha ezintsha zesifo sikashukela sohlobo 2
Ukwelashwa nokuvimbela, 2018
I-Orsoten - imiyalo yokusebenzisa, ukubuyekezwa
Unyawo lukaCharcot kwisifo sikashukela: ukwelashwa, izimpawu zokuqala nokuvimbela
Izinkinga zesifo sikashukela, 2018
Ukudla kwesifo sikashukela - imenyu yokudla kanye nenkomba ye-glycemic yokudla okuvunyelwe etafuleni
pobedidijabetes.org © Copyright 2020. All Rights Reserved. | Isifo Sikashukela Sokunqoba!